G/Wakiillada ee DG Puntland oo si Aqlabiyadleh u ansixiyey Dastuurka Cusub ee Puntland. [Akhris …] – Radio Daljir
Juunyo 29, 2009 12:00 b 0
Garowe, June 29- Baarlamaanka Dawlad goboleedka Puntland ayaa maanta waxaa ay ku ansixiyeen si aqlabiyad leh Dastuurka Cusub ee Dawlad goboleedka Puntland, kaas oo qodobbo ka mid ah Dastuurkaasi uu ka dhex abuurey ismaandhaaf.
Waxaa soo xaadirey hoolka Baarlamaanka maanta illaa iyo 54 Xildhibaan, iyada oo ay ka maqnaayeen 13 Xildhibaan waxaa si gacan taag ah ku ogolaadey illaa iyo 49 Xildhibaan halka ay ka aamuseen Saddex xildhibaan waxaana diidey illaa iyo Labo xildhibaan.
Guddoobiyaha Baarlamaanka Dawlad goboleedka Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo ku dhawaaqey natiijada cod bixintaas ayaa sheegey in hadda waxii ka danbeeya lagu dhaqi doono deegaannada DG Puntland dastuurkaan cusub kaas oo loo baahan yahay in sharci ahaan loo meel mariyo.
Horey ayaa Baarlamaanka DG Puntland waxaa ay ansixiyeen qaar ka mid ah qodobada Dastuurka dawlad goboleedka Puntland iyaga oo ka sii doodayey qodobadii harsanaa maalmihii la soo dhaafey.
Waxaa ka mid ahaa qodobadaasi ugu horreyn Hor-dhaca Dastuurka oo ay ka muujiyeen muranno iyo ismaandhaafyo markii hore golaha Wakiillada, iyada oo ay ka mid yihiin arrimahaasi sidoo kale qeexidda deegaannada dawlad goboleedka Puntland iyo halka ay dhacaan, in Puntland ay yeelato Astaan iyo calan u goonni ah iyaga oo kala mid ah dawladda Federaalka Astaanta iyo heesta qaranka.
Waxaa sidoo kale lagu soo darey Dastuurka cusub ee DG Puntland in awoodda dalka ay ku tartamaan habka Axsaabta badan ee diimuquraaddiyadeysan iyo in ay golayaasha deegaannada iyo kan Wakiillada ay ku tartamaan Asxaabta.
Haddii uu ka hirgalo Dastuurka waxaa la arkaa in dhammaanba uu haro qaabta ay wax ku qeybsadaan dadka ku bahoobey deegaannada Puntland iyaga oo hab diimuquraaddiyadeed hadda kaddib wax ku qeybsan doona.
NATO oo ciidammo iyo maraakiib hor leh u soo diraya badda Somaliya. [Akhris …]
Rayad ku dhintey Duqeyn loogu geystey Magaalada Muqdisho.[Akhris …]